किन हुन्छ जवानीमै मुटुरोग ?
दिनेश गौतम सोमवार, मंसिर ४, २०७४ 7384 पटक पढिएको
काठमाडौं : प्रकाश दाहालको हृदयाघातबाट निधन भएपछि आइतबार मुटुरोग विशेषज्ञहरू दिनभर व्यस्त बने। सञ्चारमाध्यममा अन्तर्वार्ता दिन व्यस्त उनीहरू अबको एक साता युवाको मुटु परीक्षणमा जुट्नुपर्ने आकलनमा छन्। टेलिभिजन प्रस्तोता इन्द्र लोहनी र पूर्वयुवराज पारस शाहलाई हृदयाघात हुँदा जँचाउन अस्पताल आउने युवाको भीड बढेको मुटुरोग विशेषज्ञहरू स्मरण गर्छन्।
प्रकाशको हृदयाघातबाट निधन भएपछि डराउँदै जँचाउन आउने युवाको संख्या स्वतः बढ्ने सहिद गंगालाल हृदय केन्द्रका वरिष्ठ मुटुरोग विशेषज्ञ डा.मनबहादुर केसीले अनुमान गरे। उनले भने, ‘पछिल्लो समय नवधनाढ्य युवामा मुटुरोग बढ्दो छ। कुनै युवाको हृदयाघातबाट मृत्यु भएपछि यो वर्गका युवा लाइन लागेर जँचाउन अस्पताल आउँछन्।'
आर्थिक र सामाजिकस्तर उकासिएसँगै यो वर्गमा आकांक्षा चुलिएको छ। त्यससँगै मानसिक तनाव पनि थपिएको छ। व्यायाम नगर्ने प्रवृत्ति छ। धूमपान, मध्यपान र खानामा चिल्लो पदार्थ तथा मासुको प्रयोग बढेको छ। जसले रक्तनलीलाई साँघुरो अथवा पूर्णरूपमा बन्द गराएर हृदयाघात गराउन सक्ने वरिष्ठ मुटुरोग विशेषज्ञहरू बताउँछन्।
जीवनशैली र खानपानले नै छाती दुख्ने (एन्जाइना) र हृदयाघातका साथै मुटुको मांसपेशी, नली वा धड्कनलाई प्रभाव पार्न मुख्य भूमिका खेल्ने चिकित्सकको भनाइ छ। डा.केसी भन्छन्, ‘अधिक मदिरा र सुर्तीजन्य पदार्थ सेवन गर्ने नवधनाढ्य युवामा हृदयाघात हुने गरेको छ।'
अस्वस्थ जीवनशैली र वंशाणुगत कारणले पनि युवामा हृदयाघात हुने गरेको देखिन्छ। युवाको जीवनशैली नै रोगमय बन्दै गइरहेको वरिष्ठ मुटुरोग विशेषज्ञ डा.केसी बताउँछन्। उनी भन्छन्, ‘निष्क्रिय जीवनशैली र स्वास्थ्यलाई प्रतिकूल हुने खालका आनिबानीले हृदयरोग बढाउन सहयोग पुर्‍याएको छ।'
हृदयाघातबाट नेपालमा युवा नै बढी प्रभावित भएका छन्। महिलामा उत्पन्न हुने इस्टोजेन हर्मोनले हृदयाघात हुनबाट जोगाउँछ। होटलमा पटकपटक तेल तताएर राख्ने, त्यहीं तेलमा पकाएको खाद्यपदार्थ मुटुका लागि हानिकारक हुने डा. सुजीव राजभण्डारी बताउँछन्। उनले भने, ‘अधिकांश होटलको खाना मुटुका लागि अस्वस्थ छ।'
गंगालाल हृदय केन्द्रका वरिष्ठ मुटुरोग विशेषज्ञ डा.राजभण्डारी भन्छन्, ‘जीवनशैलीलाई हेक्का राख्नुपर्छ। मोटोपना भएका व्यक्तिका साथै व्यायाम नगर्ने, चिल्लो पदार्थ अत्यधिक खाने र चुरोट सेवन गर्नेहरू हृदयाघातको जोखिममा पर्छन्।'
वंशाणुगत छ भने त्यसलाई नियन्त्रण गर्न नसकिए पनि जीवनशैली बदलेर हृदयाघातबाट बच्न सकिने डा.राजभण्डारीको तर्क छ। हृदयाघात भई मृत्यु हुनेमध्ये झन्डै ५० प्रतिशतको घरमै मृत्यु हुने गरेको छ।
विश्व स्वास्थ्य संगठनले सन् २०२० हृदयाघात सबै रोगलाई उछिनेर संसारकै एक नम्बर हत्यारा रोगका रूपमा स्थापित हुने भविष्यवाणी गरेको छ। नेपालमा १० प्रतिशत जनता मुटुरोगबाट पीडित भएको अनुमान छ। मुटुरोग विशेषज्ञका अनुभवमा नेपालमा दुई दशकयता मुटुका रोगीको संख्या ५ गुणाले बढेको छ।
मंगलवार, मंसिर १९, २०७४ स्वास्थ्य चौकी इन्चार्ज नहुँदा नवजातको मृत्यु
मंगलवार, मंसिर १९, २०७४ ‘मास क्याजल्टी' मा भएन संवेदना
बिहीबार, मंसिर ७, २०७४ सस्तोमा अाैषधि किन्न बाटो खुल्यो
सोमवार, मंसिर ४, २०७४ एमबीबीएस प्रवेश परीक्षा मंसिर १६ गते हुने
आइतवार, मंसिर ३, २०७४ चिकित्सकको निष्कर्ष : प्रकाशलाई आकस्मिक हृदयाघात
शुक्रवार, मंसिर १, २०७४ स्वास्थ्य शिविरमा थप दुई जनामा डेंगु बिरामी भेटिए
मंगलवार, कात्तिक २८, २०७४ स्वास्थ्य सूचकमा सुधार: बाल स्वास्थ्यमा फड्को
सोमवार, कात्तिक २७, २०७४ विषादी सेवनले दाजुको मृत्यु, भाइ आइसियुमा
'पहिले अध्यादेश अनि पद त्याग' 10165
उम्मेदवारले पाएको भन्दा बदर मत बढी 1301
सशस्त्रमा एपीसी खरिदमा किचलो, शान्ति मिसन गुम्ने खतरा 18068
संवैधानिक अस्पष्टता : प्रधानमन्त्री पहिले कि संसद् बैठक ? 2817
बाबुरामलार्इ ‘माओवादीकै भोट' 20234
किरण र पृथ्वीसुब्बाले थाले मुख्यमन्त्रीको कसरत 5435
कांग्रेस नेतृत्वको असफलता 2231
वाम सफलताका कारण 2066
विवाह : मागी कि भागी 2321
हिँडेरै ७७ जिल्ला पुग्ने शरदको योजना 569
चार सय सरुवामा छानबिन 950
गौचन हत्या प्रकरण : मदिराको लतले समातिए हतियार कारोबारी 6991
अख्तियारको सुझाव सरकारले मान्नुपर्छ : राष्ट्रपति 654
गौचन हत्या प्रकरण : समातिए हतियार कारोबारी 1747
नक्कली नागरिकता बनाउने गिरोह पक्राउ 2476
मोबाइल टावर निर्माणमा विदेशी कम्पनीको रुचि 1841
टेलिकम अपरेटरको आम्दानी घट्यो 1442
प्रतिस्पर्धाले सस्तो बन्दै भ्वाइस कल सेवा 18532
फोनकल प्रतिमिनेट ३०१ रुपैयाँ ! 11578
फोरजी सेवामा ‘प्राइस वार’ 6956
एक महिनासम्‍म एनालगबाटै टिभी प्रसारण गर्न दिने मन्त्रालयको निर्णय 6967